Confirmado: Este es el diseño del OnePlus 5T | Androidsis
E gosipụtara nkwenye OnePlus 5T
na asịrị banyere onye ọhụrụ OnePlus 5T ha abawanyewo urua abụọ gara aga. Na ekwentị ọhụrụ nke akara ndị China na-agụ n'ọtụtụ asịrị. Ọ bụ ezie na ọ bụghị ọtụtụ nkọwa akọwapụtara ka amatara ruo ugbu a. Fewbọchị ole na ole gara aga, anyị gwara gị gbasara igwefoto na ngwaọrụ ahụ ga-etinye, ma ọ bụ otu n'ime nkọwa ole na ole ka ekpughere ruo ugbu a.
Enwere otutu kwuru na kwesiri imewe nke OnePlus 5T a. Ọtụtụ chepụtara na ụdị ọhụụ a ga-aga nzọ na ihuenyo enweghị okpokolo agba, ihe nke mbụ ohipu nke ihe oyiyi yiri iji gosi. N'ikpeazụ, anyị amatalarị atụmatụ nke ekwentị ahụ. You chọrọ ịhụ ekwentị ọhụrụ OnePlus?
Ọ bụ ekele Evan Bass onye nweela ike ịma akụkụ nke imewe ahụ nke ọhụrụ a dị elu site na ụlọ ọrụ China. Maka ndị na-amaghị ya, Evan Bass bụ otu n'ime isi mmalite a pụrụ ịdabere na ya. Ọ na-abụkarị maka nzacha ma ọ bụ ihe oyiyi nke aghụghọ. Yabụ na ọ bụ isi iyi dị mkpa maka ọtụtụ ụlọ ọrụ mgbasa ozi.
N’ihi ihe onyonyo a, nke ị ga-ahụ n’elu, anyị ga-ahụ na asịrị ndị anyị nụrụ ziri ezi. Na OnePlus 5T pụtara maka iji ohere karịa na ihuenyo. Firmlọ ọrụ China na-agbaso otu usoro nke afọ na ihuenyo ngwaọrụ. Ha nzọ na a Ihuenyo na o siri ike ọ bụla osisi.
Na mgbakwunye, ọ ga-enwekwa ihu igwe kpakpando nke 2017 a. Onye OnePlus 5T ga-enwe nha 18: 9, na-ahụkarị na ekwentị nwere okpokolo agba na-enweghị ihu. Anyị nwekwara ike mara na nke a ọhụrụ nlereanya ga-abụ toro ogologo na mbara karịa onye bu ya ụzọ. Ya mere, ụlọ ọrụ ahụ chọrọ ịkụ nzọ na usoro ọhụụ.
Ọ dị ntakịrị ihe iji mara ekwentị ọhụrụ OnePlus a. Ga-emesị bụrụ Nọvemba 20, ụbọchị a họọrọ maka ya. Yabụ na ntakịrị ihe na-erughị izu atọ anyị ga-enwe ike ịhụ ọkwa ọhụrụ a dị elu. O doro anya na nke a OnePlus 5T na-eweta obi ụtọ. Anyị na-atụ anya na ọ ga-adị ka atụmanya ndị ụlọ ọrụ China na-eke. Gịnị ka unu na-eche banyere ekwentị a?
- Evan Blass (@evleaks) October 30, 2017
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Noticias » E gosipụtara nkwenye OnePlus 5T
Budata akwụkwọ ahụaja kachasị dị egwu maka ememme Halloween
Google ga-edozi nsogbu niile Pixel 2 na ụgwọ ọrụ